राप्रपा एकता र मुलुकको भविष्य – eRoyaltimes
‘सिएनएन सुपर हिराे’ को उपाधि पुष्पालार्इ
दर्शन धर्म हुन सक्दैन ः दामोदर गौतम
मेलम्ची सुरुङमार्ग अब साढे पाँच किलोमिटर मात्र निर्माण बाँकी
– होमभक्त कुरुम्बाङ
यो सबैले थाहा पाएकै कुरा हो । कम्युनिष्टहरूको वहुमतको सरकार भए पनि मुलुक अस्तव्यस्त छ । जनताले जुन किसिमको अपेक्षा गरेका थिए, त्यो अपेक्षा अनुरुप सरकारले जनतालाई राहात दिन सकेन । शान्ति सुरक्षाको विषय हेरौं, कालाबाजारिया हेरौ, महँगी हेरौ, विकासको सम्बन्धमा बाटोघाटो हेरौं । चारैतिर अस्तव्यस्त छ । त्यसैले यो सरकार असफल मान्न सकिन्छ । यो सरकारलाई घच्घचाउने कुनै दल निस्केनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेस पनि यो सरकारको विरोध गर्नुको साटो भ्रष्टाचार अनियमितता गर्न मौका दिइरहेको छ । काग्रेसले सरकारले गरेका कामको पक्ष पोषण गरिरहेको भन्दा हुन्छ । त्यसो त काग्रेस आफै आन्तरिक घर झगडामा अल्झिरहे झै देखिन्छ र सरकारका राम्रा वा नराम्रो कामको मूल्याङ्कन गर्दै अघि बढ्नु पर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष काग्रेस चुपचाप रहनाले ओली सरकारलाई मन लागि अघि बढ्न मौका मिलेको देखिन्छ । त्यसो त न हामीले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता, महगीको जोडदार रुपमा आवाज उठाइरहेका छौं । यस विषयलाई हाम्रो पार्टीको नेतृत्वबाट पनि जोडदार रुपमा आवाज उठाइरहनु भएको छ । अब महंगी, भ्रष्टाचार, अनियमितताका विरुद्ध हामी तिव्र रुपमा अघि बढ्ने छौ ।
सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो जन्मदिनमा नेपालको नक्शा भएको केक काटे । त्यो आधुनिक नयाँ सामन्ती प्रथाको रुपमा भन्दा हुन्छ ।
विगतमा देश परिवर्तनको नाममा नेपाली जनताको जिउधनको सुरक्षा थिएन । अनाहकमा सत्र हजारको ज्यान गयो भने अहिले वर्तमान सरकारले समृद्धिको नाममा राष्ट्रिय स्वाधिनता माथि खेलवाड भएको देखिन्छ । यसको अर्थ देशको भविष्य माथि चोट पुगिरहेको छ ।
यसै बीच तत्कालीन संचार मन्त्रि गोकल वास्कोटाले ७० करोड घुस लिन खोजेको जुन अडियो सार्वजनिक रुपमा सुन्नमा आयो, यो अत्यन्त निन्दनीय र गम्भीर छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वास गरेको मन्त्रिबाट यत्रो भ्रष्टाचार हुन खोज्नुलाई सानो रुपमा लिनु हुन्न । यस विषयमा राज्य सम्यन्त्रहरूले कानूनी रुपमा छानविन गर्नुपर्छ । स्पष्ट रुपमा भन्दा प्रधानमन्त्रीले ओलीले भ्रष्टाचार गर्दिन भने पनि राज्यका विभिन्न निकायमा व्यापक रुपमा भ्रष्टाचार अनियमितता भएको देखिन्छ । त्यसो त वर्तमान राज्य सत्तालाई जनहीतका लागि कार्य गर्न मौका छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्नु प¥यो । वाइडवदी, सुनकाण्ड, यति, एनसेललाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारले सकेमा जनताको सरकारप्रति विश्वास गर्ने वतावरण बन्ला । ओलीले भने अनुसार गर्ने हो भने ठूला भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गरेर जनतालाई देखाउन सक्नु पर्छ ।
हुन त वर्तमान सरकार जनताको अभिमत अनुसार चलेको देखिदैन । नेकपाकै घोषणापत्र अनुसार सरकार चलेको देखिदैन । काम गरेको पाइदैन । कसरी हुन्छ सत्तामा टिक्ने, आफ्नो मान्छेलाई पक्ष पोषण गर्ने, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने मात्र सरकारको नेतृत्वकर्ताबाट भएको देखिन्छ ।
– (लेखक होम भक्त कुरुम्बाङ राप्रपा (संयुक्त) का केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)
In 2008, Yuval Noah Harari,ayoung historian at the Hebrew University of Jerusalem, began to writeabook derived from an undergraduate world-history class that he was teaching. Twenty lectures became twenty chapters. Harari, who had previously written about aspects of medieval and early-modern warfare—but whose intellectual appetite, since […]
धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा
प्रमुख दलमा फेरी पुरानै विवद
Royal Times6years ago
प्रथम महिला अन्तरिक्ष यात्री
तन्दुरी चिकेन एसियाली मुलकमा बढी प्रचलित परिकार हो ।